Fitaovam-panohanana China MT, fametahana lamba ho an'ny MT, siramamy mipetaka mandripaka, Fitaovana marindrano MT
Home > Products > Lehilahy mamelatraMT
Ny vokatra avy amin'ny MT , mpanofana manokana avy any Shina, MT , Mamelatra tànana ho an'ny MT mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Mandroson-drivotra R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ny kalitao avo lenta D40-32
MT hozakaina amin'ny fametahana rantsantanana amin'ny fametahana rantsantanana
Ny kalitao avo lenta D40-25 Tool Holder
BT MTA mamihina ny akanjo MAS403
DIN2185 MT2-1 Lehibe avo lenta
High Quality DIN2185 MT2-1 Volo-tongotra
Ireo kalitao avo lenta C45 MT
High Quality DIN2185 MT Sivanina
Ny fitaovam-pamokarana mahazatra
Toeram-pandehan'ny fitaovana fanenotena fitaovana fantsom-bozaka
Vidin'ny singa: USD 7.6 - 7.9 / Piece/Pieces
Ny kalitao avo lenta D40-32 Ny fitaovana tsara ho an'ny mpanamboatra hatsikana Azo atao ny mihazona fitaovam-pandrosoana miloko manga eo amin'ny CNC iathe. Model: D40 (7pcs), D32 (6pcs), D25 (4pcs), D20 (3pcs), D16 (2pcs) Ny TeLi anay indrindra amin'ny karazana angadrano, karazana fitaovan'ny fitaovana...
DIN2187 40cr Extension Drill Sleeves Môlôkely maranitra maromaro, fantsom- panafody antsoina hoe boribory fanantonana, andry fehy. - ho an'ny latabatra mihodinkodina, fametahana milina mena, fametahana fametahana milina fanoratana, fametahana masin-tsambo manify, fametahana setroka manify, 7: 24NT miova androfana,...
MT hozakaina amin'ny fametahana rantsantanana amin'ny fametahana rantsantanana Môlôkely maranitra maromaro, fantsom- panafody antsoina hoe boribory fanantonana, andry fehy. - ho an'ny latabatra mihetsiketsika, fametahana milina fametahana milina, fametahana fametahana milina fanoratana, fametahana...
Ny fitaovam-pamokarana mahazatra Ny fitaovana tsara ho an'ny mpanamboatra hatsikana Azo atao ny mihazona fitaovam-pandrosoana miloko manga eo amin'ny CNC iathe. Model: D40 (7pcs), D32 (6pcs), D25 (4pcs), D20 (3pcs), D16 (2pcs) Ny TeLi anay indrindra amin'ny karazana angadrano, karazana fitaovan'ny...
BT MTA mamihina ny akanjo MAS403 * Standard: DIN2185 * Materia: C45 * Fifandraisana amin'ny manodidina:> = 85% Ny teli indrindra fa tany samy hafa collets, fitaovana samy hafa mpihazona, bt fitaovana mpihazona, fitaovana CAT mpihazona, dat fitaovana mpihazona,
DIN2185 MT2-1 Lehibe avo lenta Môlôkely maranitra maromaro, fantsom- panafody antsoina hoe boribory fanantonana, andry fehy. - ho an'ny latabatra mihodinkodina, fametahana milina mena, fametahana fametahana milina fanoratana, fametahana masin-tsambo manify, fametahana setroka manify, 7: 24NT miova androfana,...
High Quality DIN2185 MT Sivanina Môlôkely maranitra maromaro, fantsom- panafody antsoina hoe boribory fanantonana, andry fehy. - ho an'ny latabatra mihodinkodina, fametahana milina mena, fametahana fametahana milina fanoratana, fametahana masin-tsambo manify, fametahana setroka manify, 7: 24NT miova androfana,...
High Quality DIN2185 MT Sivanina Môlôkely maranitra maromaro, fantsom- panafody antsoina hoe boribory fanantonana, andry fehy. - ho an'ny latabatra mihetsiketsika, fametahana milina fametahana milina, fametahana fametahana milina fanoratana, fametahana fametahana fametahana masaka, setriny manify, 7: 24NT miova...
Toeram-pandehan'ny fitaovana fanenotena fitaovana fantsom-bozaka Ny fitaovana tsara ho an'ny mpanamboatra hatsikana Azo atao ny mihazona fitaovam-pandrosoana miloko manga eo amin'ny CNC iathe. Model: D40 (7pcs), D32 (6pcs), D25 (4pcs), D20 (3pcs), D16 (2pcs) Mpanamboatra fitaovam-pandevonan-tsinga manify...
Shina MT mpamatsy
Contact Surface:> = 85%
Ny rantsan-tànana mipetaka amin'ny moron-tsofina dia harefo ny vy, anatiny sy ivelany. Mpandrindra lehibe avy amin'ny habe iray miakatra amin'ny manaraka na misisika mankany amin'ny roa lehibe lehibe (izany hoe 2- rantsan'i MT); Izany dia mamela ny No.2. Ny fametahana marika amin'ny rantsan-tanana mba hampiasaina ho an'ny No.3. Matetika dia misy rantsan-tànana maromaro no miara-miasa mba hahazoana ny mari-pahaizana Morse.
Ny sisin'ny morse dia avy any amin'ny No.0 Morse manomboka amin'ny No.7. No.3 no malaza indrindra; drills aprox. 23mm hatramin'ny 32mm. Ny milina fanasan-drivotra lehibe indrindra dia ny No.2 na No.3.
Ny taovam-pandrosoana mora ihany koa dia azo ampiasaina toy ny lavaka fampitahana izay ahafahanao manitatra ny halavan'ny fitaovana fanodinana amin'ny fampiasana 3MT - 3MT lavaka fanangonana (aprox 200mm amin'ny lavany).
MT Mamelatra tànana ho an'ny MT Mandroson-drivotra
Mamelatra tànana ho an'ny MT